Man City Oo Gurigeeda Ku Qaarjisay Crystal Palace Islamarkaana Hogaanka Horyaalka Dhinac Ka Qabatay. - iftineducation.com
iftineducation.com – Manchester City ayaa hogaanka horyaalka Premier League la qabatay kooxda Chelsea ka dib markii ay 3-0 ku xaaqeen kooxda Crystal Palace oo marti ugu aheyd garoonka Etihad Stadium iyadoo David Silva uu labo gool oo ka mid ah dhaliyay, waxaana ay soo bandhigeen inaysan gooldhaliye u baahneyn iyadoo Yaya Toure uu gool, gool dhaafay ku soo xiray ciyaarta.
Tababare Manuel Pellegrini ayaa isbedel badan ku sameeyay kooxdiisa, isagoo James Milner ku soo bilaabay afka hore kaasoo ka ciyaarayay booska 9ka beenta ah, madaama ay dhaawac kaga maqnaayeen seddexdiisa weeraryahanka Sergio Aguero, Dzeko iyo Jovetic.
Manchester City ayaana dareentay maqnaanshiyaha gooldhaliyayaashooda iyagoo kubado fiican ciyaaray qeybtii hore balse dhameystirkooda uu ahaa mid liitay, kooxda City ayaana ciyaarta inteeda badan heysatay qeybtii hore, waxaana ay dhiseen fursado fiican oo aan dhameystir laheyn.
Manchester City goalkeeper Joe Hart makes a save from Mile Jedinak of Crystal Palace
Halka kooxda martida ah ee Crystal Palace ay iyagana dhankooda fursado heleen una dhawaadeen inay shabaqa soo taabtaan bartamihii qeybta hore ee ciyaarta, laakiin labada kooxood ayaa ku kala nastay barbaro goolal la’aan ah.
Manchester City ayaana ku bilaabatay si dardar leh qeybtii labaad ee ciyaarta iyagoo durbadiiba cadaadis xoogan saaray kooxda Crystal Palace kuwaasoo si naf la caari ah u difaacanayay laakiin kooxda Manchester City ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 49aad.
Xiddiga khadka dhexe Fernandinho ayaa kubad u dhex bixiyay Zabaleta kaasoo isna u celiyay David Silva oo darbadiisa ay ku dhacday Scot Dann ka hor inta aysan dabamarin goolhayaha Crystal Palace, taasoo ka dhigtay in kooxda martida loo yahay ay 1-0 ku qabato hogaanka ciyaarta. Man City ayaana goolkaas ku dhalisay darbadoodii ugu horeysay ee ay la bartilmaameedsadeen goolka.
Manchester City ayaana cadaadiska halkeeda ka sii waday iyagoo weeraro ku wada kooxda Palace ilaa iyo ay ka heleen goolkii labaad ee ciyaarta daqiiqadii 61aad, Kolarov ayaa dhanka bidix kubad karoos ah ka soo dhigay, waxaana shabaqa ku taabtay David Silva oo dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta iyo goolkii labaad ee Manchester City, waxaana ay aheyd goolkiisii afaraad ee horyaalka ee xilli ciyaareedka.
Daqiiqadii 68aad kooxda Palace ayaa aamintay inay gool soo ceshteen markii Zaha iyo Bolasie ay si fiican isku fahmeen ka hor inta uusan karoos u qaadin dhanka McArthur kaasoo madax ku dhaliyay kubada laakiin waxaa looga diiday offside. Ku celiskii la daawaday ayaana muujiyay in go’aankaas uu qalad ahaa iyadoo McArthur uu la sinaa Demichelis.
Manchester City ayaana natiijada ciyaarta xaqiijisatay daqiiqadii 81aad markii kubad rogaal celis fiican ah ay soo qaadeen, Navas ayaa kubad u dhigay James Milner kaasoo isna si fiican ugu sii dhigay Yaya Toure oo kubad awood leh goolka ku tuuray, iyadoo kubada ay ku dhacday geeska birta ka hor inta aysan shabaqa gelin.
Manchester City ayaana heshay seddex darbo oo goolka ku bartilmaameedsan, waxaana ay ku dhaliyeen seddex gool. Iyadoo Demichelis uu ku dhawaaday inuu gool iska dhaliyo dhamaadkii ciyaarta.
Waxaana ay ciyaarta ku soo idlaatay 3-0 oo ay guusha ku raacday kooxda martida loo ahaa ee Manchester City kuwaasoo haatan hogaanka horyaalka Premier League 39 dhibcood kula haya kooxda Chelsea inkastoo farqiga goolasha ay ku sareyso kooxda Blues oo kulan uu u harsan yahay islamarkaana isniinta ciyaari doonta.
Midowga Yurub oo dhaqale ku taageraya dib usoo celinta dhaqaalaha Soomaaliya